မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2018-02 > အသက်အဘို့ထိုကျောက်ဆူး
သင်၏ဘ ၀ အတွက်ကျောက်ဆူးတစ်ခုလိုအပ်ပါသလား။ အဖြစ်မှန်ကျောက်တုံးများပေါ်တွင်မင်းကိုနှိပ်စက်ရန်ကြိုးစားနေသည့်ဘဝမုန်တိုင်းများ? မိသားစုပြproblemsနာများ၊ အလုပ်ပြုတ်ခြင်း၊ ချစ်ရသူတစ် ဦး သေဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောဖျားနာခြင်းတို့ကြောင့်သင်၏အိမ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည်။ သင်၏ဘဝအတွက်သင်၏ကျောက်ဆူးနှင့်သင်၏အိမ်၏အခြေခံအုတ်မြစ်မှာယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်သေချာသည့်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။
စမ်းသပ်မှုများကသင်သင်္ဘောပေါ်သို့လှိုင်းများကျနေသောလှိုင်းများကဲ့သို့သင့်ကိုရေလွှမ်းမိုးသည်။ သင့်အပေါ်၌လှိုင်းတံပိုးများမြင့်တက်နေသည်။ သင်္ဘောကြီးများသည်နံရံတစ်ခုကဲ့သို့သင်္ဘောများဆီသို့စီးဆင်းသွားသောကြောင့်၎င်းတို့အားဖြိုခွဲလိုက်ခြင်း - ထိုကဲ့သို့သောအစီရင်ခံစာများကိုသင်္ဘောသားအဖြစ်အပျက်များအဖြစ်ကြာမြင့်စွာကတည်းကပယ်ချခဲ့သည်။ နဂါးလှိုင်းတွေရှိတယ်။ ထိုအခါချောမွေ့သောရေတွင်ငြိမ်းချမ်းစွာရွက်လွှင့်ခြင်း၏အမှတ်တရများကုန်ဆုံးသွားပြီ။ ယခုအချိန်တွင်ဖြတ်သန်းသွားသောကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အတွေးများသာရှိသည်။ မေးခွန်းမှာရှင်သန်နေသောသို့မဟုတ်နစ်မြုပ်နေခြင်းလော။ သို့သော်ဘ ၀ ၏မုန်တိုင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်သင့်အားနေရာချပေးမည့်ကျောက်ဆူးတစ်ခုလိုအပ်သည်။ ဤအရာသည်သင့်အားကျောက်ဆောင်များပေါ်သို့မကျရောက်စေရန်သင့်အားကာကွယ်ပေးသည်။
Das Buch der Hebräer sagt, wir haben einen Anker, die sichere Hoffnung auf Rettung durch Jesus Christus: «Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt – durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstösslich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daranzusetzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht; sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang» (Hebräer 6,18-19 NGÜ)။
သင်၏ထာဝရအသက်မျှော်လင့်ချက်ကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ကျောက်ချထားပြီးသင်၏ဘ ၀ ၏မုန်တိုင်းများသည်သင်၏သင်္ဘောကိုဘယ်တော့မျှမနစ်မြုပ်နိုင်ပါ။ မုန်တိုင်းများကသင့်ကိုလှည့်ပတ်နေတုန်း။ လှိုင်းတံပိုးများကသင့်ကိုထိလိမ့်မည်။ သို့သော်ကြောက်စရာမလိုပါ။ သင်၏ကျောက်ဆူးသည်မအောင်မြင်နိုင်သောကောင်းကင်၌တည်နေသည်။ သင်၏ဘ ၀ ကိုသခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်နှင့်ထာဝရလုံခြုံစေသည်။ သင့်ဘ ၀ ကိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်ပါကသင့်အားတည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုပေးမည့်ဘဝအတွက်ကျောက်ဆူးတစ်ခုရှိသည်။
Jesus lehrte in der Bergpredigt etwas Ähnliches: «Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein; es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört» (Mat. 7,24-27 NGÜ)။
ဤတွင်သခင်ယေရှုနောက်လိုက်ကြသောလူစုနှစ်စုကိုသခင်ယေရှုဖော်ပြသည်, und diejenigen, die ihm nicht nachfolgen. Beide bauen gut aussehende Häuser und können ihr Leben in Ordnung halten. Das Hochwasser und die Flutwellen prallen auf den Fels (Jesus) und können dem Haus nichts anhaben. Auf Jesus zu hören verhindert nicht den Regen, das Wasser und den Wind, es verhindert den totalen Zusammenbruch. Wenn die Stürme des Lebens auf Sie prallen, brauchen Sie ein solides Fundament für Ihre Stabilisation.
သခင်ယေရှုသည်သူ၏စကားကိုကြားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုတည်ဆောက်ရန်သာမကလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအကြံပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုနာမထက် ပို၍ လိုအပ်သည်။ သူပြောတာကိုလုပ်ဖို့လိုလိုလားလားရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာ၌ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးကိုယ်တော့်ကိုယုံကြည်သင့်သည်။ ယေရှုကသင့်အားရွေးချယ်မှုတစ်ခုပေးသည်။ သူကမင်းသူ့ကိုမယုံလျှင်ဘာဖြစ်မလဲလို့ပြောတယ်။ သင်၏အပြုအမူကသင်သူ့ကိုယုံကြည်သည်၊ မယုံကြည်သည်ကိုပြသည်။